सल्लाह नगरेरै राजदूत सिफारिसपछि ओली-प्रचण्ड भेटवार्ता अनिश्चित – Dainik Sangalo
October 1, 2020 144
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको भेटवार्ता अनिश्चित बनेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायत र अमेरिकाकाको राजदूत सिफारिस गरेकामा प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
निरन्तरको संवाद जारी रहेकै समयमा सरसल्लाह नगरेरै राजदूत सिफारिस गरिएपछि ओली-प्रचण्डबीचको भेटवार्ता नै अनिश्चित बनेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘सरसल्लाह अनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा, त्यसो हुन सकेन । त्यसैले आज हुने भनिएको भेटवार्ता नै अनिश्चित बनेको छ । बेलुकीसम्म नयाँ कुरा आएमा भेटवार्ता सम्भव होला । तर, सम्भावना झन्झन् कमजोर बन्न थालेको छ ।’
Prevएक्कासी ह्वात्तै घट्यो अमेरिकी डलरको भाउ, कुन देशको कति ?
Nextखेलबहादुरको ड रलाग्दो खेल्! लुटेरै किने काठमाडौँमा यत्रो जग्गा, परिवार र आफन्तको मसेत मिलेमतो